Qaabkan hadaad ugu raaxayso gacalisadaada raaxo darteed waa dhareerinaysaa | Gaaloos.com
Home » galmada » Qaabkan hadaad ugu raaxayso gacalisadaada raaxo darteed waa dhareerinaysaa
Marka aad dareento in aad u baahan tahay la kulanka lamaantaada nolosha kula qaadatay nin yahow hore ha ugu deg degin in aad ka dalbato bilaabista ciyaarta sariirta waayo waxaa suurta gal ah in lamaantaadu aysan nafsiyan diyaar u ahayn la kulankaaga.
Hadaba waxaa la joogaa doorkii haatan nin yahow waxaana lagaa rabaa in aad iska dhigto xariif oo aad qaado talabaadan waana hubaal in baashaalka idin dhex mari doona adiga iyo gacalisadaada marar badan aad jeclaan doonto in soo noq noqdo.
Umuuji xaaskaaga in aad doonayso oo aad rabto in aad soo qubaysto iyadana aad ka doonayso in ay saabuunta kuugu daliigto dharka ama kuu mar mariso jidhkaaga oo dhan, markaas kadibna usii jiid dhanka barkada qubayska halkaasna ka bilow musasalka yar ee Romantic-ka kaas oo ka bilaabanaya kaftan, qosol iyo in biyaha oo la isku saydh saydho ilaa ay dharka iska bixiso ayna kula qabaysato waxaana halkaasi ka bilaabmaya isu daliigida sabuunta amaba in aad isku mar marisaan jidhkiina sabuunta.
Waxaa jira dad badan oo aan ka fakarin qubayska ka hor galmada taana waa khalad kaliya waayo waxa ay u haystaan in la iskugu baahan yahay oo kaliya ciyaarta sariirta uun balse raaxadu waa mid meel walba gasha waxaana ay u baahan tahay haweenaydu in la siiyo wakhti ku fulin oo loogu raaxeeyo amaba lagula qoslo oo loogu sheekeeyo.
Kadib qubayska ku dheh erayo kaftan iyo qosol isugu jira xaaskaaga oo idin soo xasuusiya maal mihii koowaad ee guurkiina iskuna day markan in aad kula dhex ciyaarto gacalisadaada gudaha biyaha adiga oo ku ciyaaraya timaheeda, xabadkeeda, dhabarkeeda baashaalkaasna wad ilaa aad ka aragto in shumicii indhaheeda uu sii laciifayo hana joojin baashaalkaas ilaa ay ka gaadho in niyadeeda ka tiraahdo alla mar lee muu kaa codsado in uu weerarka soo qaado si aad u wada raaxaysataan.
Marka aad jidhka iska qalajisaan u muuji dareen raaxo ay ku dheehan tahay oo xabad xabad u jiifso una sheeg in aad u baahan tahay xoogaa yar oo riix riixitaan ah hana iloobin in aad adna u kareemiso amaba aad u mariso Kareemada ay isticmaasho xaaskaagu.
Intaas kadib isku day in aad kasoo xabad galiso dhanka dhabarka waayo haweenku aad ayey u jecel yihiin in laga soo xabad galiyo gadaal markaas hadalo yar yar oo xam xam ah ugu sheeg dhagta xaaskaaga ilaa ay la xanta xantooto isla markaasna waxaad fursad u helaysaa in aad badhideeda ku ciyaarto ama salaaxdo.
Nin yahow ha u qaadan in aad intaas ku kicisay xaaskaaga dareenkeeda marka aad halkaas marayso iyadana weydii qaabka ay u rabto in aad u baashaaliso oo u ogolow in iyadu doorato habka ay u rabto baashaalka ilaa ay ka gaadho heerka kacsiga la dhareerisana haka dayn salaaxida.
Haweenka qaarkood waxa ay aad u jecel yihiin in laga xanta xanteeyo dhanka xubintooda taranka amaba kintirka ee haka laba labayne si toos ah u abaar oo dhunko kuna ciyaar lagamana yaabo in ay ku ku iloowdo ilaa geeridaada waa ay ku xasuusnaysaa xaaskaagu hadii aad sidaas u yeesho.
Nin yahow aan xariifka ahayn marka ay dhamayso ciyaarta hore jiif ha ugu cararin ee u mahad celi lamaantaada oo xoogaa sii baashaali markaas ayayba haweenku raaxo ka macaan tii hore helaan hana u qaadan in ay la mid tahay weel dharagta la isaga bixiyo amaba xanjo marka macaanka laga dhamaysto la iska tufo.
Title: Qaabkan hadaad ugu raaxayso gacalisadaada raaxo darteed waa dhareerinaysaa